‘चैत मसान्तभित्रै वार्षिक कार्यक्रम सक्छौँ’ सञ्जय कुमार तुम्वाहाङफे, नगर प्रमुख-म्याङलुङ नगरपालिका, तेह्रथुम
जनतापाटी बिहीबार, फागुन ८, २०७६ मा प्रकाशित
पोहोर–परार अधिकांश स्थानीय सरकारले सोचे अनुरुप विकास निर्माणको रकम खर्च गर्न सकेनन् । तर, यो वर्ष संघ सरकारले फागुन–चैतभित्रै वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम पूरा गर्न भनेको छ । के स्थानीय तहमा त्यसअनुसार काम भइरहेको छ ? हामीले सोझै स्थानीय सरकार प्रमुखसँग कुरा गर्ने गरेका छौँ । यहिक्रममा आज हामीले रोजेको स्थानीय सरकार हो, तेह्रथुम जिल्लाको म्याङलुङ नगरपालिका । २०७१ साल वैशाख २५ को मन्त्रीपरिषदले ७२ वटा नगरपालिका कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै साविकका म्याङलुङ्ग, तम्फुला, साब्ला, पिप्ले, जिरिखिम्ती र आम्बुङ्ग गाविस सहित ६ वटा गाविसहरु समायोजन भई २०७१ जेठ ०५ गतेबाट म्याङलुङ नगरपालिकाको विधिवत थालनी भएको हो । यो नगरपालिकाले पूर्वमा खोरुंगाखोला, पश्चिमा पिगुवा खोला, उत्तरमा संखुवासभा जिल्ला र दक्षिणमा तमोर नदी (पाँचथर जिल्ला)लाई छोई तेह्रथुम जिल्लालाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ । यो नगरपालिकालाई १० वटा वडामा विभाजन गरिएको छ । २०६८ को जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या १९,६५९ हुँदा महिला १०,५५० र पुरुष ९१०९ छन् । हामीले यसै नगरपालिकाका नगरप्रमुख सञ्जय कुमार तुम्वाहाङफेसँग वार्षिक कार्यक्रम, बजेट र वस्तुस्थितिबारे कुरा गरेका छौँ ।
मेयर सा’व सन्चै हुनुहुन्छ ?
–हजुर, आरामै छुँ ।
तपाईँको नगरपालिकालाई सुगम कि दुर्गम, के भनम् ?
–सुगम नै भनौँ ।
अनि, यो वर्षको बजेट कति हो ?
–प्रदेश, संघले दिने विभिन्न अनुदान सबै गरेर ५२ करोड चानचुन हो ।
त्यसमा पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च कति ?
–कुल बजेटको झण्डै आधा छ । पुँजीगत र चालु आधा–आधा नै होला ।
देखिनेगरीका काम अर्थात् ठूला योजना के छन् त ?
–वैकुण्ठ खानेपानी, सिंचाई लिफ्टिङ्, म्याङलुङ चक्रपथ, प्राविधिक शिक्षालय आदि ठूलो योजना हुन् ।
यीनको बजेट चाँहि भन्न मिल्दैन..
कृपया जानकारी पाम् न ?
–प्राविधिक शिक्षालय प्रदेशको बजेट हो, १ करोड । चक्रपथको बजेट ३ करोड छ । खानेपानी, १ करोड । लिफ्टिङ डेढ करोडको हो । यस्तै, डेढ करोडकै कृषि भेटेरीनगरी कार्यक्रम छ ।
अनि मेयर सा’व काम कति सक्नु भो त ?
–हामीले अहिलेसम्म ४० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेका छौँ । ‘चैत मसान्तसम्म सक्ने, असार मसान्त नताक्ने’ लक्ष्य हो, हाम्रो । टेण्डर गरेका कामहरु सकिन केही समय लाग्ला । उपभोक्ता समितिबाट हुने कामहरु चाँडै सकिन्छन् । हामी असार मसान्तमा रातारात काम सक्ने र उपभोक्ता समिति पोस्ने पक्षमा छैनौँ । र, हामी भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियनामा लागि परेका छौँ ।
सामाजिक विकासका कार्यमा के छ प्रगति ?
–सामाजिक विकासमा जनतासँग मेयर कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । हामी जनताकहाँ प्रत्यक्ष गएर उहाँहरुको मर्का बुझ्छौँ । र, कार्यान्वयन पनि गर्छौँ । गर्भवतीका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौँ भने । निःशुल्क शववहान पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ । यस्तै, आउने शैक्षिक सत्रदेखि सामुदायिक विद्यालयमा ३ वटा क्लास अंग्रेजी माध्यममा गर्ने योजना बनाएका छौँ भने, विद्यालय बालबालिकामैत्री र खाजाको व्यवस्था गर्ने गरी व्यवस्थित गर्दै छौँ ।
आकर्षक कार्यक्रम चाँहि ?
–यो वर्ष डडेल्धुरा र बैतडीबाट ल्याएको २२ हजार दाँते ओखरका विरुवा वितरण गरिएको छ । एउटा विरुवाको १५ सयदेखि ५ हजारसम्म परेको छ । तर, ३ वर्षमा फल दिन थाल्छन् यी विरुवाले । म चीनको युनान प्रान्तको भ्रमणमा गएको बेला त्यहाँ गरिएको दाँते ओखरखेतीबाट प्रभावित भएँ । र, त्यहाँको प्रविधिबारे ज्ञान पाएँ । भौगोलिक हिसाबले हाम्रो नगरपालिकाको ९ सयदेखि ३५ सय मिटर हाइटमा यो खेती फस्टाउने देखियो र हामीले विरुवा ल्याएर रोपेका छौँ । अहिले नेपालमा काश्मिर र चीनबाट अरर्बौैैँको दाँते ओखर आयात हुन्छ । हामीले यसलाई बढावा दिनसक्यौँ भने नगरपालिकालाई सम्पन्न बनाउन सक्छौँ ।
संविधानले दिएको अधिकारलाई हेर्दा स्थानीय सरकार उत्पादनका हिसाबले प्रतिस्पर्धी हुनु पर्ने हो, तपाईहरुले आफ्ना गरबासीको
आयरस्तर बढाउने अन्य उपाय केही निकाल्नु भएको छ ?
–हामीकहाँ ठूला फ्याक्ट्रिको कुरा अहिले नै सम्भव नहोला । तर, म्याङलुङलाई ढाका (कपडा)को राजधानी बनाउँछौँ, हामी । यसलाई औद्योगिक उचाईमा लैजाने कार्यक्रम ल्याएका छौँ । प्रदेशको पनि बजेट छ । ढाकाको उत्पादनलाई बढाएर निर्यातमा जोड दिन्छौँ । परापूर्वकालदेखि तेह्रथुम ढाकाको राजधानीका रुपमा चिनिँदै आएको छ । हामीले धागो समेत स्थानीय उत्पादनबाटै बनाउन लगाएका छौँ । यसको प्रवद्र्धन गर्न सकिए आम्दानी र रोजगारी एकसाथ बढ्नेछ ।
भ्रमणवर्ष चलिरहेको छ, के छ चहलपहल ?
–हामीले अंग्रेजी नयाँ वर्षमा फुड फेस्टिवललगायत थुप्रै कार्यक्रम गरिसक्यौँ । अब नेपाली नयाँ वर्षमा भव्य कार्यक्रमको तयारी गरिरहेका छौँ । अहिले पनि घुम्न आउनेको चहलपहल जारी नै छ ।
संघ र प्रदेश सरकारलाई केही भन्नु छ ?
–संघलाई के भन्नु ? अधिकारजति स्थानीय तहमा दिइसकेपछि बजेट त्यही अनुसारले दिनु पर्दथ्यो । र, प्रदेश सरकारका कार्यक्रम अलपत्र हुने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले अनुगमन मात्रै गरेको भए हुने । उहाँहरु आफैँ प्रत्यक्ष कार्यक्रम गर्न खोज्नु हुन्छ र उहाँहरुले गरेको कामको इनिसिएशन लिने अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन । म्याङलुङ सदरमुकामसँगै भएकाले कर्मचारी आउन नमान्ने र अभाव हुने समस्या भने छैन । तर, कर्मचारीको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु चुनौतीपूर्ण छ । जसरी हामी जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने छ त्यसरी उहाँहरुले पनि जनमुखि कामलाई प्राथमिकता दिन सक्नु पर्दथ्यो । अहिलेसम्म कर्मचारीमा काम काट्ने मानसिकताले वास गरिरहेको छ ।
सहकारीले नै दुग्ध प्रशोधन केन्द्र चलाउने १० मिनेट पहिले
वेब सिरिजको बढ्दो क्रेज, नेपाल किन भयाे कमजाेर ? २५ मिनेट पहिले
कोसीमा हाम फालेका दाहाल बेपत्ता ४५ मिनेट पहिले